Ny famaritana sasany momba ny Samsung Galaxy A51 dia tafaporitsaka Androidsis
Vetivety dia hahazo eo afovoany vaovao amin'ny andiany Samsung Galaxy A malaza isika, sy ny filtration ny mampiavaka azy ary ny famaritana teknika lehibe azy, izay vita tsara ora vitsivitsy lasa izay, araka ny voalaza. Finday inona no resahina? Ho an'ny Galaxy A51, mazava ho azy!
Samsung dia zatra nandefa fiovana samihafa amin'ny finday avo lenta. Ny Galaxy A51 dia havaozina sy somary nohatsaraina ny Galaxy A50Mazava ho azy, noho izany hizara zavatra vitsivitsy amin'ity fitaovana ity ianao - na tazomy, fa tsy izany - ary ireo fampahalalana vaovao dia manondro izany.
Ny fivoahana taloha avy amin'ny benchmark an'i Geekbench dia misy ifandraisany amin'ity elanelam-potoana manaraka ity, toa. Ny Samsung Galaxy A51 dia voalaza fa niseho tao amin'ny kaonty fitahirizan'ity benchmark ity miaraka amin'ny octa-core Exynos 9611 chipset ary RAM 4 GB. Ny rafitra fiasa izay navoakany tamin'io fotoana io dia ny Android Pie.
Ny rafitry ny sary eo an-tampon'ity terminal fampandehanana antenaina nandrasana hatry ny ela ity dia hohidira ao anaty casing miendrika "L". Voalaza fa hisy sensor efatra izay hananany eo amin'ny tontonana voalohany, raha ho an'ny selfie tsy mihoatra ny iray no andrasana. Ho fanampin'izany, Ny finday dia hanana mpampifandray 3.5 mm, efijery AMOLED FullHD + misy ny lohany ary hanana seranan-tsambo USB Type-C sy mpamaky ny dian-tànana eo amin'ny efijery. Mikasika ny hatsarany, dia mety ho misy loko volafotsy, mainty sy manga.
Ny tatitra sasany dia milaza fa ny smartphone dia efa nanomboka namokatra tany India. Mazava fa milaza amintsika izany fa ny daty fandefasana azy dia ho hita ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ka ao anatin'ny fotoana fohy dia lasa ofisialy. Mazava ho azy fa azo antoka fa ho tonga any India ihany izy io amin'ny voalohany. Noho izany, tsena hafa no handray azy io avy eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tsikombakomba manan-danja amin'ny Samsung Galaxy A51 dia tafaporitsaka
Android 10 amin'ny endriny milamina dia efa tonga ao amin'ny Asus ZenFone 6 amin'ny alàlan'ny OTA vaovao